Akanakisa Linux Mitambo 2019. Kubheja Pane Linux Ongororo Result | Linux Vakapindwa muropa
Sevhidhiyo mutambo wekutsikisa makambani fambisa kune gore, mukaha uri pakati mazita anowanikwa yeWindows neLinux achange achinyangarika. Parizvino, linuxeros isu tinofanirwa kuenderana neisina kuwanda asi kukura kuchipa cheplatform yedu, kana, shandisa mitambo yeWindows inotsigira kushandiswa kwezvikamu zvinoenderana.
Mune Nyaya yapfuura takatanga kuongorora mhedzisiro yeongororo yakaitwa pakati pevaverengi veiyo yakasarudzika portal Kutamba PaLinux.
Ikozvino iko kuchinjika kwechakanakisa mitambo chikamu.
1 Yakanakisa Mitambo yeLinux 2019 (Yemahara uye Yakavhurika Sosi Software)
1.3 Battle nokuti Wesnoth
Yakanakisa Mitambo yeLinux 2019 (Yemahara uye Yakavhurika Sosi Software)
Uyu mutambo Izvo zvakanaka kune isu vedu vasiri vatambi venguva dzose. Sanganisa danho rekutambudzika rinodiwa kuti uve unovaraidza, pasina kuomesesa kuti iwe unoda nguva yekunakidzwa nayo.
Zvinosanganisira mhando dzakasiyana dzekart mujaho neiyo 3D mifananidzo inomiririra akasiyana echisikigo kana ekufungidzira zviitiko. Chinangwa chayo ndechekuvaraidza vatambi veese hunyanzvi mazinga Iwe unogona kutamba zvakanaka nekurova vadzivisi vako nekukasira kana nekukanda zvakasiyana zvinhu kuti vabvise munzira.
Purogiramu inopa online multiplayer modhi, yemuno multiplayer modhi uye imwe chete mutambi modhi inopesana nemuchina. Iwe unogona kumhanya wakakura prix kana wega marudzi. Sezvo iwe paunowana mamwe mapoinzi, maturu matsva uye makaroti anosvinudzwa
Kana iwe uchinetseka neyakajairwa kumhanya, kune mamwe mimwe mitambo modhi futi: nguva yekuyedzwa, tevera mutungamiri, nhabvu, tora mureza, uye maviri marudzi ehondo modhi. Kana iwe usina zvakakwana nemakumi maviri nematatu epakutanga, iwe unogona kudhawunirodha zvimwe kubva paInternet.
0 AD. (anonzi "zero-ey-dee") ari chaiyo-yenguva zano mutambo ine nhoroondo yezano.
Chiito chakaiswa mugore risipo 0 AD uye kunyepedzera ku rkugadzirisa iyo yekufungidzira mubvunzo wekuti ndiani angadai akakunda dai vese varipo budiriro mumireniyamu kubva muna 500 BC kusvika muna 500 AD vangadai vakatarisana panguva yeumambo hwavo.
Pawebhusaiti yavo vagadziri vanoratidzira chiyero chavanoita pakati pechokwadi uye varaidzo:
Isu tinoisa kusimbisa kwakasimba pazvokwadi yezvakaitika patinenge tichikura AD 0. Tinoronga zvese zveyuniti yedu uye zvese zvivakwa zvedu zvichibva mukuvakwazve kwemauniti nezvivakwa zvingave zvakaratidzika senyika yekare. Isu tinovatumidza mumitauro yekutanga, senge chiGreek neLatin. Asi zvakakosha kuyeuka kuti chero mutambo unofanirwa kunakidzwa kutamba, saka muzviitiko zvakawanda, tinosarudza Gameplay kune chaiyo nhoroondo.
Battle nokuti Wesnoth
Mune ino kesi isu tine mutambo wezano vese vasina kuroora uye vakawanda-mutambi munharaunda kana online.
Nyika yekufungidzira yeWesnoth inotipa matambudziko akasiyana sekutanga pakutsvaga kwakasimba kuponesa umambo hwedu, tichizvisunga pachedu kudzivirira maLich Lords kubva kutiuraya, kugadzira dombo rinopisa mukati mepasi, kudzivirira humambo hwedu kurwisa necromancer uto, kana kutungamira boka revapukunyuka kuenda kuburikidza nekupisa jecha kutarisana nechakaipa chisingaonekwe.
Pano tinopindura mubatanidzwa wekuvaka uye shongwe mitambo yekudzivirira.
Mutambi unogona kugadzira maketeni akawandisa ekuchaja ako turrets, gadzira zvigadzirwa kuti ugadzire zvivakwa uye uzvidzivirire kubva kumafungu evavengi. Iyo multiplayer modhi inotsigira zvese kushandira pamwe uye kusangana.
Shanduro yemahara yeMindustry inogona kutorwa pasi kubva pawebhusaiti yako, asi kana iwe uchida zvese maficha, iwe uchafanirwa kuitenga pane Steam.
Icho chidhakwa (maererano navo) wekutanga munhu shooter mutambo. Iyo ine yakajairwa mitambo modes yechikamu ichi mukuwedzera kune mamwe akagadzirwa kunyanya nenharaunda yayo. Kuti ikubatsire kufamba navo, unenge uine zvombo makumi maviri neshanu, chimwe nechimwe chichava chakakodzera mhando yemamiriro, saka unofanirwa kuona kuti wasarudza chaiyo. Iwe unogona zvakare kuzvitsigira neruzivo rwunopihwa pachiratidziki (inogadziriswa) kana nechero ipi yemepu makumi maviri neshanu yakaiswa nekusarudzika (pamwe neiya akagadzirwa nharaunda)
Vagadziri vanovimbisa izvozvo Uyu mutambo unovaraidza vese vari vaviri wemujaho wemitambo uye iye anoda kutora chikamu mumakwikwi emakwikwi.
Wakatamba mitambo yeLinux gore rapfuura? Tinoda kuti iwe ushandise fomu yekutaura kuti utiudze nezve chiitiko chako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Yakanakisa Mitambo yeLinux 2019. Kubheja Pane Linux Readers 'Sarudzo